KAABASHKA OO KHAL: KHUDAARTA UGU WANAAGSAN EE CUNTADA AH EE JIILAALKA - KAABASHKA
Xulashada ugu fudud iyo kuwa ugu caansan waa caleenta khudradda ka dib marka laga hadlayo dabacasaha. Noockan sheyga ah waxaa loo diyaarin karaa oo kaliya guriga, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa dukaamo badan, sidaa daraadeed marwalba waad tijaabin kartaa ka hor intaanad tamar helin salad karinta.
Aynu bilowno iibsiga alaabooyinka lagama maarmaanka ah. Waxaan u baahan doonaa inaan iibino madaxa yar ee kaabajka cad, geedo, karootada, saliidda cuntada, milixda iyo sonkorta. Inta badan maaddooyinka si ay u iibsadaan oo aanay u baahnayn.
Ogow waxa ka dhigi kara midhaha wanaagsan iyo xun.
500 g kaabajka;
2 dhexdhexaad ah ama 1 karooti waaweyn;
4 tbsp. l oo khal;
saliidda cuntada (doorashada);
Waa muhiim! Wixii karinta, waxa fiican inaad isticmaasho karootada yaryar, sida khudradda giant-ka weyni ay ka mid tahay noocyo calafka, sababta oo ah dhadhanka saxanka ayaa la dhumin doonaa.
Video: Kaabashka leh dabacasaha iyo khal
Waxaan sii wadi karnaa diyaarinta alaabta.
Si khafiif ah u jar kaabajka ah si ay u sameeyaan xariijimo yar oo dherer yar. Ka dib markaad jarjartid, isku duub digsi weyn ama baaqul, ka dibna si adag u tirtir gacmaha. Kaabashka waa inuu ka dhigaa casiirka, haddii kale geeddi-socodka caleenta wuxuu qaadanayaa dhowr jeer waqti dheer.
Karootada waa in la kariyaa, ka dibna lagu daraa kaabajka. Ha ilaawin in aad diirada saarto khudradda.
Ku dar khal iyo sonkorta. Waxaad isticmaali kartaa seddex doorasho oo khal: cad, tufaax ama bariis. Laga soo bilaabo xulashada khamriga isla markiiba waa laga tagay.
Saliidda ayaa lagu daraa marxaladda ugu dambeysa. Hooyooyinka intooda badan waxay ku darsadaan oo kaliya marka ay geliyaan qayb ka mid ah saxanka, taas oo ah, kahor isticmaalka. Gaabashada saliidda gabbaldayaha waxay saamaysaa dhadhanka kaliya, laakiin ma aha xawaaraha caleenka.
Waa muhiim! Sisin waa lagu daraa si kor loogu qaado geedi socodka bilowga, sidaas awgeed waa la yareeyn karaa haddii ay jirto dhibaato caloosha ama mindhicirrada.
Ugu dambeyntii, ku rid weelka khudaarta ku jirta qaboojiyaha ilaa saacad. Wakhtiga ka dib, saxanka ayaa diyaar u ah inuu cuno.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido waxyaabaha wanaagsan ee khatarta ah ee noocyada kala duwan ee kaabajka: Brussels, Savoy, casaan, aan tayo lahayn, broccoli, kohlrabi, kale iyo paki.
Iyadoo leh beetroot
Next, waxaan diyaarin doonaa doorasho kale, kaas oo, marka lagu daro dabacasaha, xididdo ayaa sidoo kale lagu dari doonaa. Hooyooyinka intooda badan waxay ka cabsanayaan inay sameeyaan noocan oo kale ah caleemo, sababtoo ah waxay u maleynayaan in xididdo ay noqon doonto mid adag, qoyan iyo dhadhanka, laakiin waa in la ogaadaa in aan isticmaalno khal, sidaas darteed waa inaadan welwelin.
Video: kaabajka leh xididdo jiilaalka
Waxaan u baahan doonaa waxyaabahan soo socda:
2 kg oo kaabash;
400-450 g of xididdo;
Karootada 300 g;
4 xabo oo waaweyn oo toon ah;
150 ml oo ah 9% khal.
2 tbsp. l saliid gabbaldayaha.
Khudaarta oo dhan waa inay noqdaan kuwo cayriin, oo ay ku jiraan xididdo. Uma baahnid inaad wax karsato wax ka hor, waa ku filan inaad dhaqdo oo diiriso, iyo kaabajka caleemaha dibadda.
Waa muhiim! Ilaalinta muddada-dheer, kaliya kaabash goor dambe ayaa loo isticmaalaa.
Kaabashka shredo si ay u ahayd mid ku haboon in lagu geliyo weel. Haddii aad isticmaashid digsi ballaaran ama baaquli, markaa waxaad goyn kartaa sida aad jeceshahay. Ka dib markaa, Kaabashka waa in yar la tirtiraa by gacanta si loo yareeyo mugga, iyo hesho juice lagama maarmaan ah.
Iska yaree xididdo yar oo jilicsan. Waxaad isticmaali kartaa foornada, haddii aad doorbideyso. Maaha mid u qalma in la gooyo si aad u caan ah, sida xididdo ayaa lumin doona badan oo casiir ah, taas oo ah sababta aan u heli doonin midabka cas cas ee kaabash.
Waxaan ku faafinnaa kala badh xididooyinka la jarjaray ee hoose ee weelka, ka dib kala badh kaabashka waxaa la dhigaa weel isku mid ah.
On top of lakabyada ay keentay jiifay dhexdhexaad ah ama toon la jarjarey. Waxaad sidoo kale ku daadi kartaa lakabka cusbo, iyadoo la isticmaalayo kala badh heerka caadiga ah.
Iska yaree dabacasaha ama siddooyinka, ka dibna ku dhaji dusha top of toon.
Waxaan ku faafin haraadiga kaabajka ah, lakabka ugu dambeeya waa dabocase. Waxaan heleynaa isku mid ah salad badan "Fur". Waxaa la sameeyaa si dhammaan lakabyada si siman loo qooyo oo ay qabsadeen midabada xididdo.
Waxaan qaadanaa 1 litir oo biyo ah oo milixda milixda haray iyo dhammaan sonkorta ku jirta. Ku dar khal, basbaas iyo 2-3 caleemo, si wanaagsan u walaaq. Marka xigta, biyaha ku sii daa dabka oo dabka ku kari. Iyadoo aanad sugin qaboojinta, biyo karkaraya waa in lagu shubaa weelka aan ku ridno khudaarta.
Ugu dambeyntii waxaan burburinaa isku dar ah kaabajka leh khudaarta si markaas dareeraha uu si buuxda u daboolo isku dar ah. Haddii aysan ku filneyn, ku dar biyo kulul caadi ah.
Waxaan sugeynaa qaboojinta, kadibna waxaan ku haynaa qaboojiyaha muddo seddex maalmood ah. Saxanka waa diyaar.
Tixgeli doorasho wanaagsan oo leh basbaas buluug, taas oo ugu wanaagsan ee loogu tala galay fasaxyada qaboobaha. Kaabashka qasacadeysan leh basbaas alwaax waxay ku tartami kartaa yaanyada qajaarka ama qajaarka caadiga ah
Video: saladh kaabaj leh basbaaska
1 kg oo kaabash;
1 guluubka caadiga ah;
1 basbaas weyn oo reer Bulgarian ah oo aan lahayn muuqaalo muuqaal ah;
100 ml oo saliid ah gabbaldayaha;
50 ml oo ah 6% qalabka cider-ka ah cider;
3 tbsp. l sonkorta
Waa muhiim! Laguma talin karo in la isticmaalo bacrinta maaddada dhirta laga sameeyo ama barafka, sida ma siin doonto dhadhanka la filayo. Alaabtaasi waxay ku haboon tahay salad, laakiin maaha ilaalin.
Chop kaabash siib. Peel jilbaha iyo jarjar. Peel basal gesho oo googo gooyn. Saddex karootada on hayso a ganaax.
Sameynta shidaalka. Isku qas cusbo, oo khal, sonkor, saliid gabbaldayaha. Dhamaantood isku dhafan.
Waxaan qaadannaa awood weyn oo aan soo saarno khudradda oo dhan. Isku xigidku ma sameeyo farqi. Ugu dambeyntii waxaan ku shubnaa dharka, ka dib taas oo aanu bilaabi si tartiib ah isku duubi isku dar ah oo gacmaheena, si ay kaabash soo saarto casiir. In geedi socodka, waa in la isku daro si ay karootada, basasha iyo basbaaska si siman loo qaybiyo, oo aan ka tagay hal meel.
Waxaan bixinnaa isku darka si aanu u istaagno qiyaastii nus saac, ka dib markii aan ku qabanno xabado oo u dir qaboojiyaha.
Alaabta ayaa diyaar ah maalin. Ka hor inta isticmaalka, waxaad ku dari kartaa saliid gabbaldayaha.
Iyada oo basbaas kulul
Ma aha in qof kastaa jeclaado xulashada ilaalinta, si kastaba ha ahaatee, kaabajka tufaaxa leh basbaaska gaduud yar oo tiro yar ayaa ah ku darida hilibka ama kalluunka. Kaliya xusuusnow in cuntadani aysan ku haboonayn carruurta.
1 karootada waaweyn;
3-4 dhar qoyan, dhexdhexaad ah;
100 ml oo ah 6% oo geedo ah;
100 g oo sonkor ah;
4-5 caleemo yar yar;
allspice iyo basbaaska madow;
2.5 Art. l cusbada;
3-4 yaryar oo yaryar oo bac ah.
Isla markiiba waxaa haboon in la tixgeliyo in dadka qaarkiis ay ku yeelan karaan falcelin xun oo jidhka ah si badeecad aad u fiiqan. Haddii aad dhif u isticmaasho wax basbaas ah, ka dibna yaree qiyaasta basbaaska.
VIDEO: Kaabashka lafdhabarta leh basbaaska kulul
Kaabashka jarjar godadka yar yar iyo ku rid digsi ama basin.
Waxaan xajin karootada on hayso weyn ama jarjar dhuuban khafiif ah. Iska yaree toontaada wareegyada. Ku dar Kaabashka.
Waxaan qaadnaa litir oo biyo ah kuna dar milixda, sonkorta, saliidda gabbaldayaha, basbaaska iyo caleen. Waxaan gashannaa dabka oo keeno karkariyo, ka dibna ka saar kuleylka iyo ku dar qandhada.
Ku rid kariim ah basbaas yar oo la jarjarey oo la jarjaray (si aad si dhakhso ah u heli karto oo u soo jiido haddii saxan yahay mid aad u kulul), ka dibna ku shub isku dar ah khudaarta biyo karkaraya.
Sugitaanka qaboojinta, ka dibna ku rid qaboojiyaha. Maalin ka dib, saxanka waa diyaar.
Ma taqaanaa? Dad badan ayaa isticmaala cabitaanka dheriga ah subaxdii kadib markii duufaan xoog leh. Sidaa darteed, saynisyahannadu waxay caddeeyeen in casiirku ka caawiyo in uusan sakhraan ku jirin inta lagu jiro iidada, iyo sidoo kale la qabsashada wixii ka baxsan.
Xalka xiisaha leh waa in lagu daro tufaax. Noocaan noocaas ah wuxuu ka helayaa astaamaha dheeriga ah ee midhaha, kaas oo qaadata waqti yar inuu halsano. Isla mar ahaantaana Kaabashka uma muuqdaan kuwo aan macquul ahayn.
Video: salad kaabaj leh oo tufaax ah
700 garaam oo kaabash;
200 g oo tufaax ah oo tufaax ah (kudhihiiba isla markiiba, haddii kale saxada waxay noqon doontaa "acidic");
1 karooti yar;
30 ml oo ah 6% oo khal.
Kaabashka qoyan guriga.
Si khafiif ah u jar kaabajka, ka dibna u gudbi weel si sahlan oo waxoogaa jilbaha leh gacantaada.
Waxaan karnaa karootada on hayso weyn. Ku dar Kaabashka.
Waxaan ku dhaqnaa tufaaxa, saaro asaasiga iyo diirka, jarjar oo ku dar walxaha khudradda. Isku qas wax walba
Waxaan qaadanaa 1 litir oo biyo ah, ku dar milix iyo basbaas kaas, kadibna ku rid dabka oo isku karsaaraya. Ka dib markii karkarinta ka soo kulul kulaylka iyo ku shub khal. The brine keentay ku shub isku dar ah.
Isku day inaad qaboojiso heerkulka qolka 30-40 daqiiqo, ka dibna ku dar xiirto oo ku rid qaboojiyaha ilaa hal maalin. Maalinta xigta, alaabtu waxay diyaar u tahay isticmaalka.
Waa muhiim! Waa mamnuuc in la isticmaalo suxuunta aluminium ee halsano, maadaama ay ka soo horjeedo aaladda, taas oo ah sababta dhadhanka dhirta ay u muuqan doonto saxanka.
Iyadoo leh malayga
Xeelad aad u fiican oo fudud oo sifudud ah oo ku haboon kalluunka ama kalluunka jilicsan. Waxaad heli doontaa kaliya cunto fudud, laakiin sidoo kale saxan qurux badan oo loo isticmaali karo saxan dhinaca.
Video: Kaabashka leh malayga
2.5 kg oo kaabash;
3 xididada malayga;
900 karootada g oo ah;
15 ml oo khal ah;
Isla markiiba waa u qalmaan in la xuso in haddii aad jeceshahay sauerkraut aad u, ka dibna aad qaadan kartaa khal ka badan. Ma aha oo kaliya dhadhamin, laakiin sidoo kale diyaarinta waqtiga ku xiran tahay tirada, sidaas darteed khal ka badan - waqti yar oo ay tahay lagama maarmaan in la sugo.
Sidoo kale akhri sida loo beero tufaaxa, kaabajka cas iyo broccoli.
Kaabashka daboolka ah iyo laab laab weel fudud. Markaas saddex karootada on hayso weyn iyo ku dar khudradda.
Dhaq gacmaha iyo diirka. Marka xigta, ku jar jarjar waaweyn, ka dibna u wareeji weel gooni ah.
Diyaarso weel saddex litir ah. Ku dhaji fargeetica on hoose, ka dibna ku rid cabbitaanka iyo karootada.
Qaado 1.2 litir oo biyo ah, ku dar milix iyo sonkor. Ku rid shooladda, ku karkarin oo ku dar khal. Buuxi isku walaaq khudradda leh biyo karkaraya, ka dibna waxaan si khafiif ah u tamphirnaa.
Iyadoo ay ka kooban tahay wax qaboojin karo, waxaa fiican in aan daboolin daboolka. Marka ay qaboojiso, ku dabool daboolka silikoon oo ku sumow hal maalin qaboojiyaha. Maalin ka dib, saxanka ayaa diyaar u ah inuu cuno.
Ma taqaanaa? Sauerkraut waa saxan Jarmal ah. Tani waxay ahayd sababtoo ah intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa loo diiday in uu ka iibsado Maraykanka, sababtoo ah waxay ahayd lagama maarmaan in la magacaabo saxanka "Liberty Cabbage".
Kuwani waa qaar ka mid ah cuntooyinka kaabajka leh ee kaabajka ah. Waxay kaa caawin doonaan inaad u diyaargarowdo waqtiga ugu gaaban ee fasaxa weyn ama dhalashada haddii aad u baahatid booqasho badan. Xasuuso in sheyga kiis kasta uu noqon doono mid aad u badan, sidaas darteed dadka qaba dhibaatooyinka caloosha ama mindhicirrada, waxaa fiican in laga tago isticmaalka khudradda pickled khudradda.